दशैंमा ट्याक्सी पाइएन् ? अनलाइनबाटै बुकिङ गनुहोस् यी ट्याक्सीले दिन्छन् सेवा
प्रकाशित : 8:59 am, बिहीबार, असोज २८, २०७८
काठमाडौँ । यति बेला हामी दशैं मनाइरहेका छौं । अधिकांश रमाइलो गर्नमा व्यस्त छौं । बजारका अधिकांश पसलहरू बन्द छन् भने सार्वजनिक सवारीसाधन एकाध बाहेक चलेका छैनन् ।
सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा भनेको ठाउँमा जान समस्या भएको छ । सार्वजनिक बस, माइक्रोबस जस्तै ट्याक्सी पनि अत्यन्त कम चलेका छन् ।
नगइ नहुने ठाउामा जानका लागि ट्याक्सी समेत सहजै पाउन नसकिने अवस्था छ । यदि दशैँमा तपाईं सहजै ट्याक्सी पाउन चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाटै बुकिङ गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।
दशैंमा पनि यी ट्याक्सीले दिइरहेका छन् सेवा
हाल नेपालमा विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूले राइड सेयरीङ सेवा दिइरहेका छन् । दशैँ तिहारमा सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भए पनि ती कम्पनीहरूले भने आफ्नो सेवा निरन्तर दिने जनाएका छन् ।सेवाग्राहीले मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर सहजै सेवा लिनसक्ने ट्याक्सी सेवा प्रदायकहरुले जनाएा छन् ।
मेट्रो ट्याक्सी : दशैँ तिहारमा यात्रुहरूको सहजताका लागि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको मेट्रो ट्याक्सीले जनाएको छ ।
‘यो समयमा यात्रुहरूको सजिलोको लागि हामीले काठमाडौं बाहिर नगएका साथीहरूको टिम नै खडा गरेर सेवा सुचारु गरिरहेका छौँ,’ कम्पनीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सूर्य तामाङले भने । उक्क्त सेवा मार्फत यात्रुहरूले तोकेको भाडा तिरेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर समेत जान सक्ने उनले बताए ।
मेट्रो अनलाइन ट्याक्सीमार्फत सेवा लिन चाहने यात्रुहरूले एपमा रजिस्टर सेवा लिन सक्नेछन् । ट्याक्सी स्ट्याण्डमा आएका यात्रुलाई सेवा दिनुपर्दा चालकले एपमा रजिस्टर गराई मात्र सेवा दिनेछन् । यसले गर्दा यात्रु र चालक दुवै सुरक्षित हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीले दशैँ तिहारमा पनि मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी एपमार्फत अनलाइन बुक गरेर न्यूनतम ९९ रुपैयाँमा ट्याक्सी सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । मेट्रो ट्याक्सीमा ५ हजारभन्दा धेरै ट्याक्सीहरू समावेश रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
पठाओ : यात्रुहरूले दशैँमा पठाओ मार्फत पनि ट्याक्सी सेवा लिनसक्ने छन् । उपत्यकामा राइड सेयरीङ सेवा दिँदै आएको पठाओले दशैँ तिहारमा आफ्नो सेवा बन्द नहुने जनाएको छ ।
कम्पनीले राइडर मार्फत काठमाडौँ,ललितपुर र भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइलमा पठाओ एप डाउनलोड गरेर सुविधा लिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले नेपालमा सन् २०१८ सेप्टेम्बरदेखि बाइक राइड सेयरिङ सेवा सुरू गरेको थियो भने,सन् २०१९ अगस्टदेखि ट्याक्सी सेवा सुरू गरेको थियो ।२०२० देखि कम्म्पनीले होटल तथा रेस्टुरेन्टका खाजा,खानाका परिकारको होम डेलिभरी सेवा सुरू समेत गरेको थियो ।
साहरा ट्याक्सी : यस्तै,राइड सेवा दिँदै आएको साहराले पनि दशैँ तिहारमा आफ्नो सेवा निरन्तर रहने जनाएको छ । साहरा कम्पनीले काठमाडौँ,ललितपुर,भक्तपुर र कीर्तिपुर क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ । सेवाग्रहीले आफ्नो स्माार्ट फोनको प्ले स्टोरमा गएर सहारा एप डाउनलोड गरेर सेवा लिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ट्याक्सीमाण्डू : ट्याक्सीमाण्डूले दशैँ तिहारको समयमा आफ्नो सेवा निरन्तर रहने जनाएको छ । ग्र्राहाकहरूले मोबाइलमा कम्पनीको एप डाउनलोड गरेर सेवा लिनसक्ने छन् ।
दशैेँमा पनि उपत्यकामा रहेका राइडरहरूले सेवा दिने ट्याक्सीमाण्डूकी कष्टोमर केयर अफिसर सकिना केसीले जानकारी दिइन् ।‘दशैँमा हाम्रो अफिस खुलै हुन्छ, उपत्यकामा रहेका राइडरहरूले सेवा दिन्छन्,’ उनले भनिन् ।
अन्य कम्पनीहरू : टुटल, इजी ट्याक्सी नेपाल, सारथी जस्ता राइड सेयरीङ सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले पनि दशैँँ तिहारमा बन्द नहुने जनाएका छन् । .
« राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गको ९५ प्रतिशत काम पूरा, माघसम्म सकिने
सिटिजन बैंक लुट्ने एक नेपालीसहित तीन पक्राउ »
जसले रुखको जरा देख्नै हुन्न, अद्भूत कलामा उतारिहाल्छन्, बनाए घरमै संग्राहलय (फोटोफिचर)
निर्दाेष सौन्दर्यता भित्रको सकसपूर्ण सुदुर पहाडको यात्रा
इच्छाराजले ३५ दिन भित्र ऋण नतिरे सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गा र भवन लिलाम हुने
पुर्ख्यौली बिँडो थाम्दै अघि बढेका प्रथमराज, जसले बनाउँछन् ७५ लाखसम्म पर्ने काठको मूर्ति
सुस्तायो घरजग्गा कारोबार, किन घट्दै छ किनबेच ?
खप्तडभित्रै ओझेलमा परेको मिनी खप्तड ‘खोल्लेक’ (फोटोफिचर)
ड्राइभरहरू गाडी रोकेर सडकमा झरेको पैसा टिप्न थालेपछि…